Kisimusi Parade inova chiitiko chekufa kwevanhu vakawanda muWaukesha, Wisconsin
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kisimusi Parade inova chiitiko chekufa kwevanhu vakawanda muWaukesha, Wisconsin
nhau • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Zvakatanga kuita seKisimusi apo yakakurumbira Waukesha Kisimusi Parade yakatanga kufamba mushure megore rimwe kumbomira nekuda kweCOVID-19.
Paradhi iyi yakashanduka kuita chiitiko chekukuvadzwa kwevanhu vakawanda.
Waukesha Mukuru wemapurisa anoti vanhu vanodarika makumi maviri vakakuvara panzvimbo iyi Waukesha Kisimusi Parade muWisconsin apo SUV yakapfuura nemumhomho yevatori vechikamu.
Mishumo inoti SUV yaive nevanhu vatatu mumotokari, zvichikonzeresa maawa gare gare nzvimbo yekumisikidza 3 munzvimbo meseji yakabuda panharembozha dzemunhu wese. Chikonzero chacho hachizivikanwi panguva ino.
Waukesha iguta riri mukati uye chigaro cheruwa rweWaukesha County, Wisconsin, United States. Icho chikamu cheMilwaukee metropolitan nharaunda. Huwandu hwayo hwaive 70,718 pa 2010 census. Guta riri padyo neMusha weWaukesha.
Waukesha inozivikanwa senzvimbo inochengetedza zvakanyanya uye inonakidzwa nehuwandu hwehutsotsi. "Ivo vanhu vakanaka", chapupu chakatsanangura vanhu veWaukesha. "Inzvimbo yakanaka yemhuri inoda nyika."
Mupurisa sezviri pachena akapfura nepahwindo reSUVs.
Chiitiko ichi chakaziviswa sechiitiko chekukuvadzwa kweMisa.
Yese ambulensi muguta reWisconsin yaive yakagarwa ichiendesa vakakuvara kuzvipatara. Zvipatara zvakabva kune mamwe maguta zvakamhanyira kuWaukesha kunobatsira.
Maererano nemishumo yazvino, pakanga pasina pfuti kubva kuSUV, uye haigone kusimbiswa kana chiitiko ichi chiri tsaona kana kurwisa nemaune.
Mimwe mishumo inoedza kuvaka batano pakati pedare rakakurumbira mutaundi riri pedyo.
Mishumo isina kusimbiswa inotaura nezve vanhu vakawanda vakafa. Mapurisa akati motokari yakachengetedzwa uye vari kutsvaga munhu anofarira.
Waukesha, Wisconsin 🙏 Kurwiswa kunotyisa kwakadii. SUV kurima kuburikidza nekufora bhendi uye kutamba vanasekuru 🤬 Mishumo yevaviri vakafa uye vazhinji vakakuvara. Mapurisa akawana iyo SUV uye ane 2 paangangoita 1 anofungidzirwa ari muhusungwa. pic.twitter.com/uSYAfFOUZU
— Intrepid Gondo 🇺🇲 (@SonsOfMontesQ) November 22, 2021
Zvita 28, 2021 pa07: 16